Mistery sy tsiambaratelo - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Suisse
lahatsoratra > nataon'i Josepf Tkach > Mistery sy tsiambaratelo
Ao amin'ny fivavahana mpanompo sampy dia ny tsiambaratelo no tsiambaratelo izay nosokafana ireo izay nampidirina tamin'ny rafitry ny fiankohofany. Ireo tsiambaratelo ireo dia voalaza fa hanome azy ireo ny hery sy fahaizana mitaona olona ary tsy tokony haseho amin'ny olon-kafa izany. Tena tsy nambara ampahibemaso izy ireo. Mampidi-doza ny fahalalana mahery vaika toy izany ary tsy maintsy takona amin'ny sekony rehetra izy.
Ny mifanohitra amin izany dia marina amin'ny filazantsara. Ao amin'ny Filazantsara no zava-miafina lehibe ny zavatra nataon'Andriamanitra tao sy tamin'ny tantaran'ny olombelona izay nambara tamim-pahalalana sy an-kalalahana tamin'ny olona rehetra fa tsy hitafina.
Ao amin'ny anglisy anglisy nahalasa antsika dia misy zava-miafina iray ampahany amin'ny piozila mila jerena. Fa ao anaty baiboly kosa ny zava-miafina iray, saingy tsy takatry ny sain'olombelona ambara fa nambaran'Andriamanitra izany.
Nolazain’i Paoly ho zava-miafina avokoa ny zavatra manjavozavo tamin’ny andro talohan’i Kristy, nefa naharihary tanteraka tao amin’i Kristy, dia ny misterin’ny finoana (1 Tim. 3,16), ny misterin’ny hamafin’ny Isiraely (Rom. 11,25), ny misterin’ny drafitr’Andriamanitra ho an’ny olombelona (1 Kor. 2,7), izay mitovy amin’ny zava-miafin’ny sitrapon’Andriamanitra (Efes. 1,9) ary ny misterin’ny fitsanganana amin’ny maty (1 Kor. 15,51).
Rehefa nanambara ampahibemaso ny tsiambaratelo i Paoly dia nanao zavatra roa: Voalohany, nanazava izy fa ny zavatra naseho tao amin'ny fanekena taloha dia nanjary zava-misy tao amin'ny fanekena vaovao. Faharoa dia nanohitra ny foto-kevitra miafina miafina izy ary nilaza fa ny zava-miafina kristiana dia mistery nambara, nambara ampahibemaso, nambara tamin'ny olona rehetra ary ninoan'ny olo-masina.
Ao amin’ny Kolosiana 1,21-26 Ary nanoratra izy hoe: Ary ianareo izay vahiny sy fahavalo tamin'ny asa ratsy fahiny, 1,22 Efa nampihavaniny tamin’ny fahafatesan’ny vatany mety maty izao, mba hahatonga anareo ho masina sy tsy misy tsiny ary tsy misy kilema eo anatrehany; 1,23 raha mitoetra amin'ny finoana ianareo ka tafaorina tsara ary tsy miala amin'ny fanantenana ny filazantsara, izay efa renareo sy notorina tamin'ny olombelona rehetra ambanin'ny lanitra. Izaho Paoly dia mpanompony. 1,24 Ankehitriny dia mifaly amin'ny fahoriana izay iaretako ho anareo aho, ary ao amin'ny nofoko dia manonitra izay tsy ampy amin'ny fijalian'i Kristy ho an'ny tenany, dia ny fiangonana. 1,25 Efa tonga mpanompo anareo aho noho ny fanompoana izay nomen'Andriamanitra ahy, mba hitory ny teniny aminareo betsaka, 1,26 dia ny zava-miafina izay nafenina hatrizay hatrizay ka hatramin'ny taranaka fara mandimby, fa ankehitriny dia naharihary amin'ny olony masina izany.
Miantso sy manasa antsika Andriamanitra hiasa ho azy. Ny asantsika dia ny mahatonga ny fanjakan'Andriamanitra tsy hita maso amin'ny alalan'ny fiainana kristiana mahatoky ary amin'ny alàlan'ny fitoriana. Ny filazantsaran'i Kristy dia ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra, ny vaovao tsaran'ny fahamarinana, ny fiadanam-po ary ny fifaliana ao amin'ny Fanahy Masina amin'ny alàlan'ny fiarahana sy maha-mpianatra amin'ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika. Tsy natao hafinafina. Tokony hizara amin'ny rehetra ary ampahafantarina amin'ny rehetra.
Hoy ihany i Paoly: ... izay tian’Andriamanitra hampahafantarina any amin’ny jentilisa ny haren’ny voninahitr’izao zava-miafina izao, dia Kristy ao anatinareo, ilay fanantenana ny voninahitra. 1,28 Manontany sy mananatra ny olona rehetra izahay ary mampianatra ny olona rehetra amin’ny fahendrena rehetra, mba hahatanteraka ny olona rehetra ao amin’i Kristy. 1,29 Ary noho izany koa no iezahako atao sy tolona amin'ny herin'izay miasa mafy ato anatiko (Kol. 1,27- iray).
Ny filazantsara dia hafatra momba ny fitiavan’i Kristy ary Izy irery ihany no manafaka antsika amin’ny fanamelohana sy manova antsika ho tahaka ny endrik’i Kristy. Araka ny nosoratan’i Paoly ho an’ny fiangonana tany Filipy: Ny zom-pirenentsika dia any an-danitra; izay no andrasantsika ny Mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo, 3,21 Izay hanova ny tenantsika foana, mba ho tonga tahaka ny vatany be voninahitra, araka ny hery izay ahazoany mampanaiky ny zavatra rehetra (Fil. 3,20- iray).
Tena zavatra hankalazaina tokoa ny filazantsara. Tsy afaka mampisaraka antsika amin’Andriamanitra ny ota sy ny fahafatesana. Tokony hovana isika. Ny vatantsika be voninahitra dia tsy ho lo, tsy hila sakafo intsony, tsy ho antitra na ho kentrona intsony. Hatsangana tahaka an’i Kristy ao amin’ny vatana fanahy mahery isika. Mihoatra noho izany no mbola tsy fantatra. Hoy i Jaona: “Ry malala, efa zanak’Andriamanitra isika; nefa mbola tsy hita izay ho toetsika. Fa fantatsika fa rehefa haseho, dia ho tahaka azy koa isika; fa ho hitantsika Izy araka ny maha-izy azy (1 Jao. 3,2).